MY SOMALI CULTURE: Guur Diyaar Ma U Tahay?? Hada Sax Khaladaadka Hadhowto.
Guur Diyaar Ma U Tahay?? Hada Sax Khaladaadka Hadhowto.
Ma Aroos baad isu diyaarineysaa mise waxaad rabtaa Guur waara? waa su'aal dhalinyaro badani aaney ka fakerin kuna dhiiranin khaasatan dhalinayrada Soomaliyeedee maanta , iyagoo ku degdega guurka oo aanay wali u bislaanin fahansaneyna macnaha xilkan culus ujeedooyinkiisa, iyo shuruudaha looga baahanyahay inuu qofku maro intaanu haweysanin masuuliyadaas baaxada leh.
Dhalinyarada imika waxa ay ku riyoodaan inay dhistaan aqal xalaal ah ooy la wadaagaan qofka naftoodu ka hesho maalin maalmaha ka mid ah, waxa ayna aad iskaga daba ridaan siday u qurxin lahaayeen wacdaro xoogana uga muujin lahaayeen dabaaldegaa maalinta arooskooda, iyagoo si xad dhaaf ah ugu burburiya lacag gaadhaysa kumanaan doolar. Iyagoo isku howla aroos baaxad weyn oo aad lagu dhibaatoodo kaasi oo ducada, waanada iyo Alle (SWT) ka cabsiguba ku yartahay!
Hadaba dhalinyaradaasi waa kuwama? hadii aanu is weydiino waa kuwa inala dhashay, la dhalay, asxaabta ah amaba la odhan karo cidkastoo guur hiigsaneysa. Iyadoo da' ama deegaan toona xidhaynin mushkiladani oo ah mid dhamaan Soomaalida aduunka kunool mid wada saameysey. Waata ugu weyn ee burburisa reerka cusub ee la unkay, kala erida laba waalid oo ubad iskuleh oo ah mushkilad dhabarka ka jabineysa seeska iyo asaaska bulshada Soomaliyeed.
Waxa hubaal ah in qofka guurdoonka ah ee Reer magaalka ahi aanu ahamiyada siinin arrimo fara badan, oo muhiim u ah xulashada qofka ku munaasibka ah ee uu noloshiisa la qaybsanayo, ileyn guri guntuu ka dhismaaye sidoo kale waa inuu adkaadaa seeska reerkaagan cusub ee aad dhiseyso. Waana inuu ahaadaa mid dad, dab, dabayl, iyo dhul gariirtoona waxba ka qaadeynin adigoo ilaahay la kaashanayana waa inaad horta intaada ka soo baxdaa oo qorshe yeelataa.
Dhaqan ahaan dadkeena miyigu way inaga duwan yihiin xaga doorashada iyo xulashada lamaanahooda, taasi oo marka uu nin dhalin yari u diyaar garoobo Guur uu maro talaabooyin cayiman ay ka mid yihiin latashiga reerkooda, inuu u kuur galo helista gabadh qiimo iyo qayim leh oo uu la sheekeysto, isaga oo xerinaya dhaqanka iyo hidaha iyo xeerarka u yaala bulshada Somaliyeed ee ay isu degaanka yihiin, taasi oo mararka qaarkood reerkoodu caawiyo, waxaana uu ku xushaa gabadha uu noloshiisa la qaybsanayo howlkarnimo, naxriis, dadnimadeeda, dhaqankeeda iyo fariidnimadeeda oo ay u dheertahay isfaham iyo israbitaan labadooda dhex mara.
Gabadha miyi lafteedu waxa u cad oo ay isla garanayaan inamada gayaankeeda ah waxa ku waajib ah, iyadoo marka ay u bislaato u diyaargarowda oo haweysata guur markay hesho nin hanan kara oo dheeli tiran, reerkoodana dhisi kara.
Inkastoo aynaan aheyn xoolo dhaqato oo 70% bulshadeenu ku kooban tahay magaalooyinka waxa aad u kala duwanaaday nolosha maanta iyo tii hore, iyadoo faraqii u dhaxeeyey raga iyo durmarku noqday mid is dhex galay, dhaqankii kala hagayeyna ku yaraaday ama noqday mid la taabo qaadi waayay wakhtiga iyo horumarka degdega ah ee magaalooyinka, waxaana muhiim noqotay in reer magaalkii bartaan xirfado kala duwan si ay ugu soo saartaan nolol maalmeedkooda, iyadoo horumarkii bulshadu keenay in lamaanaha is guursanayaa wada qaadaan mas'uuliyada reerkooda si ay uga dabaashaan nolosha iyo kharashka joogtada ah, taasi oo dumarkiina qabteen shaqooyin iyo xilal muhiimoo gaar u ahaan jiray ragga, taasi oo keentay isfaham waaga ugu weyn ee jira maanta.
Xil wadaaga iyo xuduudaasi isku furmaytay awgeed waxa meesha ka baxay waxyaalahii kala saari jiray mas'uuliyada reerka, khaasatan marka la ay is guursanayaan dhalinyarada wax baratay oo ku xisaabtamaya in mid walba shaqo tago oo noloshii iyo mas'uuliyadii reerka u qaybsadaan labadooda oo midkiiba helo 50% . Sida caadada u ah dalalka horumaray, dhaqankii aynu ku soo nooleyna sameyn weyn ku yeelatay. Taasi oo marka is faham waa yari dhaco u fududeysay dad badan ku degdega is furitaanka oo dhib yaraan u dhaca maadaama aan aad laysku baahneyn.
Qiyaastii 100% 40 aqal ayaa burbura sanad kasta, xaga 100% 20 aanay ku farax saneyn noloshooda guur balse dani ku baday ku wada noolyihiin! iyadoo nasiib xumo tiradaasi maalinba maalinta ka danbeysa ah mid sii kordheysa marka la'eego mujtamaceena guud meelkasta aynu joognee.
Hadaba maxaa xal ah, ee lagaga hortagi karayaa dhibaatooyinkani? Intaan heerkaasi laysla gaadhin waa in qofka gaadha da' uu ku guursado inuu horta isagu miisaanka isa saraa, oo is weydiiyaa su'aalo badan! oo u ifinaya una guud maraya isu diyaarinta nolosha cusub iyo isbedelka guurku ku soo kordhinayo naftiisa. Arrimahaas oo saldhig iyo aasaas adag u noqonaaya fahmida shakhsiyadaada gaar ahaaneed iyo run u ogaanshaha qofka kugu munaasibka ah adiga. Talaabadanina waa mid ka horeysa intaanad sheeko tagin waayo waxaa kuu suurtoobeysa ogaanshaha qofka kuu qalma ee aad isku haboon tihiin.
Waa kuwama su'aalaha aad ku ogaan karto inaad guur waara diyaar u tahay iyo inkale, waa qaar taabanaya xaqiiqada iyo danaha labada dhinacba, oon ku koobneyn kuwaaga kaliya! sababtoo ah Guurku waa wax wada qaybsi waxaanad ku casumeysaa oo u ogolaaneysaa qof kale oo lab ama dhedig ah (kaa duwan adiga) noloshaada dhinac kasta sida wada tashiga, aqal wadaaga, gogolsha, cuntada, lacagta, ehelka, caruuta (hadii ilaahay idin siiyo), ganacsiga, jacaylka, caafimadka, xanuunka iwm. Ogowna in labadiinu kala tihiin lab iyo dhedig oo aanu ilahay (SWT) isku mid idinka dhigin, xaga dabeecada, maskaxda, dhaqanka iyo dareenkaba oo dumarku yihiin caadifiyiin wakhtiyo gaar ah u baahan xanaaneyn iyo daryeel. Xagga raga ilaahay siiyey maskax miisaaman oo caadifiyadu ku badneyn, iyagoo markaaba isku daya xalinta wixii la soo gudboonaada si degdeg ahna u dhaafa oo hadal hayn waxa dhacay. Arintan oo marmarka qaarkood noqota caqabad kale oo soo wajahda lamaanaha oo loo baahan yahay in uu midba midka kale fahmo oo wax la qabto.
Iska jir indho la'aan inaad ku dhisto mushtaqbalkaaga ogowna waa aayatiin daro, mana aha mid aan ku eegi karno, dhalinteena hada soo kacaysa inay ku danbeeyaan sidii kuwii dhexe (jiilka dhexe ee la kulmay dagaalada iyo dalka burburay), jawaabta ugu weyn ee aan had iyo goor maqlo marka qof dhalinyaro ah la weydiiyo wuxuu ku guursaday lamaaniisa ama uu ku xushay waxa ugu horeeya waa Jacayl, iyo waanu Is Jeclaanay, iyo In badan baanu sheekeysaneynoo waanu is fahanay! maxaa laga sheekeystay ee laysku fahmay tolow? ma la is weydiiyey wixii muhiimka ahaa mise qof waliba intuu sida ugu heerka sareysa u soo lebistay ayuu haasawaha ku saleeyey hanaqaadka nolosheena adigaan kula hayaahe, hadmaynu is helnaa waan kuu hilwadaye?
Hadii ay sidaa tahay oo aanad ku saleyneynin guurkaaga diinteena Islaamka oo SWT Ilaahay si fiican inoogu tafatiray kaalinta qof walba, ee kuligeen layna faray xilkiisa iyo ixtiraamka ehelka, waa inaad si degdeg ah isku weydiisaa su'aalaha hoos ku qoran, markaad hesho qof aad ku qanacdo oo kula wadaaga fikirkaagana waa inaad cabirtaa dareenkaaga iyo kalgacalkaad u hayso intuu le'egyahay oo ay tahay inaad ka sinaataan labdiinuba, hana ka xishooneynin (shiixaynin) gorfeynta arrimaha xasaasiga ah ee ugu muhiimsan go'aanka mustaqbalkaaga. Waayo hadii jacayl kaliya lagu nagaanayo is furitaan muu jireen, cadho iyo dagaal joogto ah may timaaden, niyad xumo iyo is aaminid la'aan laguma waabariisteen.
Waxa lagama maarmaan ah in qofkastoo dhalinyar ahi is weydiiyo su'aalahan si aan uga badbaadino bulshadeena Soomaaliyeed burburka dhaqan, dhaqaale iyo dayacba ku haya dadkeena iyo ubadkeena, ugu horeyntiina is weydii:
1.Waxaad ku xulaneysid qofka aad guursaneyso, tusaale (dhaqan, qurux, maal,diin mise dhoof)?
2.Maxaad reerka ku soo darsaneysaa adigu maal, maskax iyo muruq?
3. Diyaar ma ma u tahay xanaaneynta ubadka aad dhasho tusaale, xoog, maal, diin, iyo cilmi (waxbarasho)?
4. Baahi iyo bukaan hadii uu qof idinka mid ah ku yimaado sidaad u gudan lahayd waajibkaaga, sideed yeeli lahayd, dulqaadkaagu waa intee?
5. Habkeebaad reerkaaga u dhiqi laheyd (xil gudashada maalinle)? tusaale: Dhaqanka, Diinta islaamka, mise isku jir.
6. Maxaad ka badeli doontaa hab u dhaqankaaga marka aad guursato, liiska samee waxaad imika qabato wakhtiyada firaaqada dibna u eeg wixii isbedel u bahan markaad guursato (tusaale caweyska badan iwm)?
7. Ma ogoshahay inaad talooyinka la wadaagto saygaaga/xaaskaaga? mise adigaa wax walba xalin kara?
8. Hadii dabeecadaheedu/hiisu is badalaan aqal galka dabadii maxaad sameyn laheyd, maxayse yihiin dabecadaha aanad aqbali karin marnaba?
9. Hadii maalkiinu yaraado ama kordho? maxaad yeeli laayd, dhimi lahayd ama dhisan lahayd?
10. Ma dantiisa yaqaan baad tahay, mise dadka u nool (qof dantiisa door bida, mise qof jecel waxa cusub iyo waxa dadka kale haystaan)?
11. Maxayse yihiin khaladaadka aan saaxmixaada gali karin xagaaga ee burburin kara reerkaaga (tusale jaad, khamri, xan,wareeg, cibaado la'aan iwm?
12.Yaa mudnaanta noloshaada ku jira kaalinta 1aad, labaad, iyo 3aad (qiimeyn ku samee dadka kuugu muhiimsan sida walidka, asxaabta, ubadka (cidii leh ubad) walaalka ilaahay iwm)?
13.Naftaada, maalkaaga, iyo mustaqbalkaaga ma la wadaagi kartaa qof kale 100%? mase u ogoshayay inay go'aano taaba gala qaadaan hadii loo baahdo?
14. Lacagtaad shaqaysatay miyaad qayb ka mid ah ama kuligeed ka qarsan laheyd xaaskaaga/saygaaga?
15. Hadii ehelkiis u baahdaan inay idinla noolaadaan ama waalidka mid ka mid ahi jilicsan yahay, maxaad ka yeeli lahayd?
16.Dulqaadkaagu waa intee adigoo misaamaaya, tusaale (daciif, dhexdhexaad, mid sareeya)? maxaa kaa cadhaysiiya badanaa hadii cadho dhacdo, ama aanad qaadan karin?
17.Xaga daryeelka iyo u dabacsanaanta taakuleynta ehelkaaga miyaad ku (liidtaa, fiicanthay, aad ugu dheertahay oo dusha u ridataa)?
18. Aabahaa iyo hooyadaa miyay wali is is qabaan mise way kala tageen? hadii walidku kala tagay yaa ku soo koriyey?
19. Yaad ku kalsoontahay ee la tashan laheyd hadii muslilad aad xalin kari weydo kula soo daristo (tusaale sheekh, walalka/walasha, waalidkaa, saaxiibkaa/saxiibada, cidna iwm)?
20. Sidee baad u aragtaa qofka la tashada xaaskiisa/seygeeda ra'igoodana qadariya?
21. Hadii lamaanahaaga iyo ehelkaa muran dhex maro miyaad ka indho qarsan lahayd, dhexdhexaadin laheyd, mise iyagaad u deyn laheyd adigoo is leh adiga kuma khuseyso?
22. Lacagta reerkiina soo gasha, ma kaligaa baa jecel inaad maamusho, la wadaagto lamaanahaaga, mise maba rabtid inaad howshaa gasho adigu oo ka warwertid maal?
23. Edbinta ubadkiina haday edeb daro muujiyaan ma waxaad aaminsan tahay in la uleeyo, wax loosheego/lana uleeyo, wax loosheego kaliya oo aan gacan la saarin.?
24. Sidee baad u hubin lahayd/wax uga qaban lahayd fariinta warxumo tashiilka, saaxiibka xun, ama ehelka danaystaha ah ee ku lidka ah gurigaagu inuu dhisnaado?
25.Sideed u aragtaa guurka ninka muslimka ah ee loo baneeyey 4ta dumar ah?
26. Su'aal u gaara gabdhaha, hadii saygaagu shaqo beelo ama maalkiisu baaba'o miyaad u samri, mise ka daldoorsan? intee in le'eg ayaad samri kartaa, goormadse ka tagi kartaa?
27. Miyaad jeceshahay inaanad ka maqnaanin xafladaha iyo aroosyada magaalada ka dhaca xitaa hadii lagu soo casumo?
28. Sideed u xalin lahayd hadii faro galin kugu sameeyaan joogto ah ehelka cusub ee noloshaada ku soo biiray ?
29. Su'aal ku socota dumarka, ma dhabaa in ninku marka uu lacag helo xaas kale guursado?
30. Sideed u xalin lahayd hadii segaagu/xaaskaagu noqoto qof gacan adag? ama si xad dhaaf ah u gacan furan oo xoolihiiniba dhigmi wayo?
31. Sirta reerkaaga yaad u sheegi lahayd ama ku aamini lahayd,tusaale: cidna, saaxiibaday/saaxiibkay, walidkay, qofkaan la sheekeysanayo markaasi, walaashay iwm?
32. Hadii saygaaga/xaaskaaga aad jacayl ka heli weydo ama u hayn weydo maxaad yeeli lahayd?
33. Sideed u aragtaa is furitaanka ? maxaad yeeli lahayd hadii saygaaga/xaaskaagu ku tidhaahdo kuma jecli ee aan is furno oo qanacaasi dhab ka yahay?
34. Hadii xaaskaagu/saygaagu dhibsado waxyaalo aanu jeceysanin oo uu neceb yahay maxaad sameyn lahayd?
35. Hadii aad ku khaldanto saygaaga/xaaskaaga maxaad yeeli lahayd?
36. Sidee baad ugu roonaan lahayd xaaskaaga/saygaaga xitaa hadaad mudo dheer is qabtaan?
37. Hadii saygaaga ama xaaskaagu cibaadada ku xun yahay, isbedelna soo wadin sideed yeeli lahayd?
Ugu danbeytii si daacadnimo ah markaad uga jawaabto dhamaan su'aalahan adigoo qiimeynaaya xaqiiqada jawaabahaaga. Waxa kuu cadaanaya halka aad ka taagantahay arrimo badan oo aanad hore uga fekerin, kedisna kugu noqon lahaa markay kula soo darsaan. Taas markaad ku guuleysato, wakhti sii naftaada aad kaga baaraan degto xaqiiqooyinka cusub ee aad daaha ka qaaday, hana ka xumaanin hadii natiijadu noqon wedo sidaad rabtay, sababtoo ah haday ugu haboon tahay ka hortaga iyo u diyaargarowga arrimaha kahor iman lahaa Guurkaaga aad ku tabacday.
Intaa dabadeed diyaar u noqo oo ku salee sahankaaga dadaal iyo helitaanka qofka xaqiidii kuu qalma ee aad isku mabda'a iyo diinta tihiin.
Posted by Milgo at 9:36 AM
Labels: Guur Diyaar Ma U Tahay?? Maqaal
nasra January 24, 2011 at 1:49 PM
mansha allah milgo runtii waxyabo badan oo la iska indho tiro ayad daha ka qaday. Waxa kaliya ee dhalinyarada badankoodu u guursadan waa "waan is jecelnahay". Waxanan aminsanahay in jacaylku dhamankaro amaba dareenka aad qofka u qabta is dhimi karo.
Milgo February 12, 2011 at 4:39 PM
haa nasra wuu is dhimi karaa hadaan labada dhinacba dheeli tirin oonay isku howlin inay wakhti gaar ah wada samaystaan labadoodu. Waxa kaloo jirta hadii seeska aqalku khaldamo inay adagtahay hadhow sixidiisa marka guriga la dhiso oo nasiib daro ku danbeeya burbur.
Jamal Hassan August 23, 2013 at 8:07 AM
Milgo, marka hore waad ku mahadsantahay, casharkan fiican eed noosoo bandhigtay.
su'aasha aadka ii soo jidatay, waxaa weeyaan su'aasha tobnaa ee ah,, ma dantii yaqaan baad tahay mise dadka u nool?
waxaan kugu dhiiri galinayaa in aanad marnaba ka cajisin inaad bulshada wacyi galiso..Mahad sanid mar labad.
Aabo Tuulo iyo Inan Magaalo.
Heesihii Saynab Laba Dhagax
Heesihii Cawaale Aadan
Guur Diyaar Ma U Tahay?? Hada Sax Khaladaadka Had...
Tartanka Gabayada Nabada ee Dhalinta Soomaaliland ...
Heesihii Shimaali Axmed Shimaali
Heesihii Sahra Halgan.
Layla Kootali (heeso)
Abwaan Faysal Aw Cabdi Cambalaash Gabayadiisii Tah...
Quruxda Xoolaheena (filimo isku jir ah)
Abwaanka Weyn ee Xasan Ganay
Heesihii Axmed Biif
Waraysi Raxma Axmed Cali (Raxma Ruuxi).
Heesihii Fartuun Birimo
Riwaayad Soomaliland (Waynu Abuuri Karnaa Nolol)
Tixmaal iyo Suugaanta Haweenka (Yuusuf Shaacir)
Tixmaal iyo Hadraawi barnaamij googoos iyo Gabay i...
Heesihii Sahra Axmed